Bandhig buugeed iyo Dhaqameed lagu qatabtay magaalada Malmo ee dalka Sweden(Masawiro)
Malmo:-Waxaa magaalada Maalmo lagu soo bandhigay bandhig buugeed iyo dhaqameed ay iska kaashadeen shirka Scansom Publishers iyo Uruurka Hidde iyo Dhaqan. Bandhiga waxaa martigaliyey oo lagu dhigay xarunta ururka Hidde iyo Dhaqan oo ka mid ururrada ugu firircoon oo ka shaqeeya daryeelka iyo kaydinta hiddaha Dhaqanka Soomaaliyeed. Waa ururkii ugu horreeyey ee ku guulaystay booqashada boqorka dalka Sweden.
Boqorka dalka iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa soo booqday xarunta ururka bishii Febraayo, sannadkii 2011. Shirkadda Scansom waxay madasha ku soo bandhigtay kutub badan oo lagu qiyaasay in ka badan 160 muunadood oo kala duwan. Buugta goobta lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa.
– Buugta carruurta
– Buugta suugaanta
– Buuga ganacsiga
– Buugta ka hadlaya arrimaha bulshada
– Kutubta Diiniga iyo
– Qaar kale
Munaasabadu waxay ahayd Carwo buugeeddii afkeenna hooyo ee ugu horreeyey oo lagu dhigo magalada Maalmo. Munaasabada kulanka waxaa loo soo cammiray si wanaagsan. Waxaa ka soo qayb galay qalabka warbaahinta iyo wargeysyada ka soo baxa magaalada Maalmo. Bandhigga waxaa xariga ka jaray masuul ka tirsan gobolka iyo degmada oo qaabilsan arrimaha dhaqanka. Daniel oo ah madaxada gobolka ayaa si weyn u soo dhaweeyey tallaabadan wuxuuna ku tilmaamay inay tahay tallaabo wax- ku-oo ah oo isu soo dhaweynaysa labada mujtamac ee dalka ku wada nool. Waa tallaabo ka hortagaysa cunsuriyada iyo midab faquuqa dadka.
Qoraaga Maxamad Sh. Xasan ayaa markaas carruurtii abaalgud guddoonsiiyey buug kala duwan oo ay shirkadda Scansom daabcday. Wacdarihii goobta ka dhacay waxaa maanta Febraayo 5ta, 2012 lagu soo daabacay labada wargeys oo ka soo baxa magaalada iyo Gobolka Malmo oo la kala yiraahdo :
– Syd Svenskan iyo
Qoraaga Maxamad Sh. Xasan ayaa markaas ka warbixiyey tirakoobka dalagga buugeed ee inoo soo go’ay 20kii sano ee ugu dambeeyey kuwaaso lagu qiyaasay 300-350 muunadood oo kala duwan. Gebagebadii iyo gunaanadkii ayaa waxaa bandhigga soo xiray guddoomiyaha ururka Warsame Yaasiin Cismaan, wuxuuna u mahadceliyey dhammaan shaqaalaha ururuka iyo jaalliyada Soomaaliyeed ee reer Maalmo oo bernaamajka qayb libaax ka qaatay.
Wixii faahfaahin la xiriir ururka: Hiddeiyodhaqan.se iyo shirkadda scansom.com.